Farmaajo oo ku baaqay in aan waxba laga badalin heshiiskii 17-ka September | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Farmaajo oo ku baaqay in aan waxba laga badalin heshiiskii 17-ka September
Farmaajo oo ku baaqay in aan waxba laga badalin heshiiskii 17-ka September
Muqdisho (Dalkaan.com) – Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qeyb galey munaasabadda xuska 78-aad ee kasoo wareegtay markii dhidibada loo aasay ciidanka Booliiska Soomaaliya.
Madaxweynaha oo jeediyey khudbad dhinacyo badan taabaneyso ayaa ka hadlay doorashada ka socoto dalka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku baaqay in aan lagu dag dagin isbadal lagu sameeyo heshiiska 17-septembar oo ay wada saxiixdeen Madaxda Dowladda Federaalka Dowlad Goboleedyada.
“Waxaan aaminsanahay in Ra’iisulwasaaraha iyo madaxda dowlad-goboleedyadu wax badan qabteen,doorashada dadban iyadaaba muran ku dhisan,heshiiskii 17-Septemper waan saxiixay meel buuna yaallaa wuxuu ahaa mid laga fakaray waa in la iska ilaaliyaa in wax lag baddalo” ayuu yiri Farmaajo.
Markale ayuu yiri ”Madaxweynayaasha iyo Ra’iisulwasaaraha waa inay diiradda saaraan qabsoomidda doorasho hufan caddaalad ku dhisan qof walba oo muwaadin ahna u tartamikaro,waxa nalaka sugaayo waa doorasho”.
Hadalka Farmaajo ayaa kusoo aadayo xilli la filayo inay dhawaan kulan Muqdisho ku yeeshaan Golaha wada-tashiga Qaran, waxayna warar soo baxayo sheegayaan inay qorsheynayaan in wax laga badalo qaabka ay u socoto doorashada weliba si gaar ah in hal deegaan doorasho laga dhigo.
Hadalka Farmaajo ayaa u muuqda farriin loo dirayo madaxda maamul Goboleedyada iyo Ra’isulwasaare Maxamed Xuseen Rooble isla markaasna looga digayo inay wax ka badalaan heshiiskii horey loo saxiixday.
Daawo: Shir ay Muqdisho ku yeesheen beelo ka tirsan Harti-Abgaal oo...
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay shirweyne ay isugu yimaadeen beelaha Cabdalla-Caroone iyo Nuugaane-Caroone ee Abgaal, kaas oo looga arrinsaday...
WARAYSI DJ SUBEER & SU’AALO BADAN OO XASAASI AH IYO HAMBALYO AROOS!!
Golaha Wadatashiga Qaran oo xalay isku soo dhowaansho ka gaaray arrinta...
Mourinho oo go’aan ka qaatay hadii uu ka tagayo kooxda Roma...
Lucas Digne oo ka dhawaajiyay kooxda Premier league-ga ee uu Xiiseenayo...
Sawirro: Muxuu Rooble caawa kala hadlay Saciid Deni iyo Axmed Madoobe?
Manchester United oo diiday Bixitaanka Jesse Lingard ee Xagaagan
Liverpool oo isha ku haysa inay sii dheeraysato rikoorka guuldaro la’aanta...